Linux Mint sava Nsogbu | Site na Linux
Linux Mint sava Okwu
na Linux Mint blog Ha nọ na-emelite ọnọdụ nke ndị sava ha ugbu a, mgbe nsogbu mmekọrịta mere na ha nke dugara n'iyi data na mmelite nke ebe nchekwa.
Ugbu a nchekwa ahụ na-arụ ọrụ, mana ọ na-adị nwayọ nwayọ ma oge ụfọdụ ọ na-ada n'ihi ọnụọgụ ndị ọrụ na-emegharị ihe UP4 n'oge a. Mmekọrịta dị n'etiti ihe nkesa na enyo ahụ akwụsịla, ya mere a na-anwa ịhazi ihe nkesa mmelite mberede iji mesoo okporo ụzọ dị ugbu a. Boysmụ nwoke nke Mint jụọ ndị ọrụ ha ka ha yigharịa mmelite ahụ ụbọchị ole na ole, ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla, nweere onwe gị ijikọ ọnụ ụlọ ahụ IRC nkata (irc.spotchat.org, #debian-linuxmint).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Linux Mint sava Okwu
Ihe 16 kwuru, hapụ nke gị
Merlin Onye Debian dijo
Ozi bara ezigbo uru ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na m jiri LMDE mana ugbu a, m nọ na ezigbo Debian.
Zaghachi Merlin The Debianite
Ọ bụ ya mere m ji nọrọ na Linux chakra 😛
aahahaha .. hey gwa m maka chakra ..
ọ na-akpụ akpụ?
ọ bụrụ na debian / ubuntu / mint jiri sudo apt-nweta nke na-eji chakra?
kedu ka esi etinye jdowloader na sublime text2 na chakra?
You nweghị ike ịka nyocha karịa.
mba! N'ihi na ọ bụghị otu ihe ahụ ịgụ .. ka mmadụ gwa m gbasara ahụmịhe ha
ihe kacha mma iji emacs 😛
Kpamkpam… I just don't have a budget for a Mac Pro Oh .. Oh, enweghị m ike ịchọpụta otú iji wụnye Lion OS na desktọọpụ PC
Emacs bụ ezinụlọ ndị ndezi ederede, ji
ha extensibility. More na Wikipedia ...
Chakra na-eji pacman dị ka njikwa ngwugwu na KDE4 dị ka DE.
Ọ dị mfe ịme ndụ-USB (ngwakọ ISO) na iwu ddrescue ma ọ bụ iwu dd (na edemede ha kwuru otu).
Ya mere, ihe chakra bụ Arch Linux mana ka anyị kwuo na ọ na-abịa na ihe ọ bụla emechara?
Mba, na mbụ ee mana Chakra adịlarị iche site na Arch.
Ha gbadoro ụkwụ n’ihe dị iche iche
Chakra GNU / Linux bụ nkesa Linux dabere na Arch Linux ma lekwasị anya na ngwanrọ KDE kachasị ọhụrụ.
More na Wikipedia | Ebe nrụọrụ weebụ: chakra-project.org
ebe ọ bụ na onyinyo ahụ apụtaghị, nke a bụ njikọ njin ọchụchọ ...
M arụnyere agụ owuru snow, mgbe ịchọchara m gụrụ na arụnyere ya ma ọ bụrụ na ị nwere nhazi intel, na amd ọ gaghị ekwe omume.
Naanị oge m nwara Mint n'onwe m, ọ dị m nwute na ndị sava ahụ dara na ọ nweghị ike imecha ihe ahụ. Site mgbe ahụ gawa, m debere ya. Ugbu a, m na Xubuntu m na-eme nke ọma. Agbalịrị m Mint n'ihi na Unity adịghị agafe. Ọzọkwa, kọmputa m abụghị ọgbọ kachasị ọhụrụ na enweghị m ego iji zụta ọzọ. Ọ bụrụ Mark nyere m ihe m ga-eji Unity.
Agbanyeghị, n'ime ọrụ izisa ozi ọma m, etinyegoro mint n'ezinụlọ dum ma ha hụrụ ya n'anya. N'oge ahụ sava ahụ rụrụ ọrụ ma ha nwere obi ụtọ.
Bugharịa mgbọrọgwụ nkebi na diski ọzọ
Echiche nkeonwe banyere LMDE Mmelite 5, 6 na 7